Bulshada ku nool dhanka waqooyi ee degmada Gaalkacyo ayaa shalay galinkii danbe garoonka kubbadda cagta Cawaale si wayn ugu soo dhaweeyay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) oo galabta socdaal kusoo gaaray dhanka waqooyi ee magaalada. Garoonka Cawaale oo loogu magac daray halgamaa Maxamed Cawaale Liibaan ayaa waxaa soo buux dhaafiyay dad u badan dhallinyaro […]
Ethiopian Airlines oo xujayda gudaha diyaaradaha ugu diyaarisay dhagaysiga Takbiirta xajka xiliga safarka lagujiro
Shirkada diyaaradaha itoobiya (Ethiopian Airlines) ayaa danadkan xajka udiyaarisay 228 duulimaad, waxaana adeegan kafaaiidaysan doona inkabadan 40kun oo xujay ah. Waxyaabaha sanadkan lagu soo kordhiyay adeega xajka ayaa waxaa kamida in xujayda gudaha diyaarada loogu diyaariyay takbiirta xajka, diyaarinta xirfadkayaal kala duwan oo dhanka luuqada ah kuwaas oo gaadhaya 37 luuqadood iyo tirada duulimaadyada xajka, […]
Shir deg deg ah oo shalay iyo maanta ugu socday magaalada Mekele, Golaha dhexe ee Jabhada TPLF (Tigray people’s Liberation Front) oo iyadu gadhwadeen ka ahayd xukunkii 30kii sano ee lasoo dhaafay ay EPRDF kuhaysatay dalka itoobiya ayaa ayaa galabta lagu soo gaba gabeeyay Mekele waxayna TPLF kulanka deg dega ah kasoo saartay bayaan 7 […]
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare Mudane, Cabdullaahi Goodax Barre ,ayaa Maanta kormeer ku tagay xarunta ay ka socoto shaqada imtixaankii Wasaaradda waxbarashada ay qaadday Sannad Dugsiyeedka 2018/2019 oo shaqaalaha wasaaraddu ay ku howlanyihiin dardargelinta dhameystirka xareynta xogta imtixaanka la saxay. Wasiirka Waxbarashada , Cabdullaahi Goodax Barre ayaa Agaasimaha Xafiiska Imtixaanaadka iyo Shahaadooyinka ee […]
Hadal-qoraal oo ka soo baxay Safaaradda ku leedahay magaalladda Addis Abeba ayaa lagu shaaciyey in Ciiddamo tiradoodu tahay Kun Askari oo ka kala socda ugu yaraan 15 Waddan ka qeyb geli doonaan Tababarkaasi Milliteri, kaasi oo socon doona bishan July 15-da ilaa 31-da. Tababarkaasi oo loogu talagalay in sare loogu qaado Khibradda Ciiddamadda Gobalka iyo […]
Howlgal maamulka degmada Dharkenley ay ka sameeyeen habeenadii la soo dhaafay ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmadaas ayay sheegeen in ay u suurta gashay in ay gacanta ku soo dhigaan koox dhac u geysan jirtay dadka deegaanka. Gudoomiyaha gobalka Banaadir iyo saraakiisha ciidamada oo maanta booqasho ku tegay degmada ayaa loo soo bandhigay ragas […]
Somaliland iyo Puntland oo loogu Baaqay inay Wada hadlaan
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan oo booqashadii u horreysay shalay ku tagay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa baaq u diray Puntland iyo Somaliland. James Swan , ayaa ka hadlay xiisada deegaan ee labada dhinac u dhaxeysa, taas oo uu qiray inay ka sii dareyso, balse wuxuu usoo jeedin wada-hadal in arrintaa laga […]
Dawlada Itoobiya oo shaacisay Qorshe Shacabka ku nool Farxad geliyey
Sida ay sheegeen masuuliyiinta Shirkadda Quwada Korontada ee dalka Itoobiya waxaa lajoojiyay Korontadii badanaa ka gu’i jirtay dhammaan dalka oo dhan iyadoo maanta laga bilaabo Xaafaduhu ay toos u helayaan adeegg Koronto oo dhammaystiran. Mas’uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in Warshadaha dalka noocay doonaan ha ahaadaane ay iyagu 50% helayaan Korontada sababtoo ah iyadoo wali […]
DAAWO:-Baarlamaanka Puntland oo ka Dooday Sidii Somaliland looga saari lahaa Sanaag iyo Sool
Barlamaanka Puntland ayaa Dood ka yeeshay xaalada gobolada Sool iyo Sanaag, Waxayna xukuumada Madaxwayne Siciid deni ka dalbadeen in ay la timaado qorshe cad oo ku saabsan soo celinta dhulka maqan ee Puntland, Kuwaasi oo ay gacanta ku hayso Somaliland.